11 waxyaabood oo dadka caqliga badan aysan ku dhihin goobta shaqada - Muraayad
Home Nolosha 11 waxyaabood oo dadka caqliga badan aysan ku dhihin goobta shaqada
11 waxyaabood oo dadka caqliga badan aysan ku dhihin goobta shaqada
Waxaa jira erayo aysan ahayn in aad ku dhahdid goobta shaqada. Si kasta oo aad aqoon u leedahay ama khibrad u heysatid, haddii aad erayadaas dhahdid dadku waxay baddalayaan fikirka ay kaa aaminsan yihiin waxayna kaaga tagayaan mugdiga.
Erayada noocaas ah dadka caqliga badan waligood ma dhahaan.
1- “Sidan caddaalad ma aha”
Qof walba wuu ogyahay in nolosha oo dhan aysan caddaalad ahayn, sida aad rabtana aysan mar walba kuu suuragaleynin. Haddii aad eraygaas tiraahdidna waxaad aaminsan tahay fikirka kaas kasoo hor jeeda, dadkuna waxay kuu arkayaan in uu caqliga kugu yar yahay.
Haddii aad dooneysid in aysan xaaladaha kugu adkaanin, dadaalka badi.
2- “Sidan ayaan mar walba wax u sameynaa”
Arrimaha tiknoolojiyadda ee maanta uu adduunka gaaray waxay ku imaadeen isbadallo joogto ah. Haddana lix bilood kaddib waxaa suuragal ah in uu isbaddal kale ku imaado.
Haddaba qofkii mooda in howlaha mar walba loo qabto sidii hore ma aha qof la socda isbaddalka horumarka ah iyo midka dib u dhaca ah ee ay caqabaduhu keenaan toona.
3- “Dhib malaha”
Kalmaddan, haddii aad ku tiraahdo qof wax kaa codsaday inta aad goobta shaqada joogtid waxay caddeyneysaa in aad codsigaas dhib u aragtid, qofkii ku weydiistay caawinaaddana waad niyad jabisay.
Dadka u muuji in aad ku faraxsan tahay waxa aad ku caawineysid ama shaqada aad u qabaneysid.
4- “Fikraddan waxaa laga yaabaa inay nacasnimo tahay” ama “waxaan qabaa su’aal nacasnimo ah
Erayadan waxay si deg deg ah hoos ugu dhigayaan sumcaddaada. Xitaa haddii aad marka dambe la imaatid fikrad cajiib ah, oo laakiin aad muujisay kalsooni darro aad ku qabtid naftaada, dadka kugu hareereysan oo dhan way kaala noqonayaan kalsoonida.
Adiga ha isku noqonin cadow. Haddii aad dhaliishid hadalkaaga, ama aadan aaminsaneyn waxa aad sheegi rabtid, dadka kalena muhiimad uma arki doonaan.
5- “Hal daqiiqad gudaheed ayaan ku qabanayaa”
Inaad howl tiraahdid waxaan ku qabanayaa daqiiqad gudaheed waxay wax u dhimeysaa xirfaddaada, waxayna muujineysaa inaad dedejineysid shaqadaas. Waxaad sidaas dhihi kartaa oo kaliya haddii aad hubtid inaad howshan ku fulin kartid wax ka yar 60 ilbiriqsi.
Siyaabo kale u muuji inaad gacan fududaaneysid ama aad shaqada u qabaneysid sida ugu dhakhsiyaha badan ee ugu macquulsan.
6- “Waan isku dayayaa”
Erayga “isku dayitaan” wuxuu muujinayaa cabsi wuxuuna dadka tusayaa in aadan isku kalsooneyn, awood buuxdana u lahayn inaad wax sameysid.
Qaado mas’uuliyadda awooddaada xirfadeed iyo tan aqooneed intaba, dushana u rido wax kasta oo aad sameyneysid.
Haddii wax lagu weydiiyo, go’aan buuxa ku samee ama ka cudur daaro, laakiin ha dhihin waan isku dayayaa.
7- “Qof hebel waa caajisloow ama waa nacas”
Wax kaaga soo kordhaya ma jiro inaad qof kula shaqeeya xumaan ka sheegtid, xitaa haddii waxa aad ka sheegeysid ay sax yihiin.
Haddii waxa aad sheegeysid aysan sax ahayn, oo dadka kale aysan mu muuqanin, markaas adiga ayaa noqoneysid qofka nacaska ah.
8- “Arrintaas aniga iima qalanto”
Jumladdaas waxay dadka kale dareensiineysaa in waxa kaliya ee aad shaqada u joogtid uu yahay mushaarka dartiis, taasina ma aha wax kuu hor seedaya inaad kusii nagaatid shirkaddaas aad ka shaqeyneysid ama goobtaas shaqo.
Haddii qofka madaxda kuu ah uu kaa dalbado in aad wax sameyso, howshaadana aysan ahayn, ha diidin marba haddii uusan ahayn wax sharci darro ah.
9- “Aniga khalad kuma lihi”
Inaad eedeysid qof kale ma aha fikrad fiican. Qaado mas’uuliyadda wax kasta oo aad ku lug leedahay.
Haddii arrin aad qeyb ka ahayd ay khaldanto, wax aad u yarba aad ku lahaatide, waa in aad mas’uuliyadda qeyb ku yeelatid.
Haddii aadan wax khalad ah ku lahaynna, isku day in aad wax sharraxdid, laakiin haku adkeysanin in aysan khaladkaaga ahayn oo kaliya.
10- “Ma sameyn karo”
Dadku ma jecla in ay maqlaan adigoo dhahaya waxaas ma sameyn karo, sababtoo ah waxay u fahmayaan in aad kas u diiddan tahay.
Haddii aadan wax sameyn karin, oo xirfaddeeda iyo aqoonteeda midna aadan lahayn, la imow fikrad lagaaga maarmi karo.
11- “Waan nacay shaqadan”
Jumladda ugu dambeysa ee dadka caqliga badan aysan goobta shaqada gudaheeda ku dhihin waa in ay “neceb yihiin shaqada”, marna cabasho kama muujiyaan.
Inaad eraygaas dhahdo waxay muujineysaa in aad tahay qof xun, tallaabada noocaas ahna shaqaale badan ayey niyad jabin kartaa.
Dadka madaxda ka ah goobaha shaqada waxay durba kala ogaadaan shakhsiyaadka sida xun u fakara ee lumin kara shaqaalaha kale ee niyadda wanaagsan.
Mar walba waxay raadiyaan dadkii baddali lahaa oo u geli lahaa booska, waxayna u badan tahay in laga eryo shaqada.
Previous article20 xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan qalbiga (wadnaha)
Next articleToddobadan arrimood caadeyso maanta laga billaabo